သတင်း - အလိုအလျောက်အပိုပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်းကျွမ်းကျင်မှု
1. အဆစ်ချောမွေ့ရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ အပိုပစ္စည်းများသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်သိုလှောင်ခြင်းကာလအတွင်းတုန်ခါမှုနှင့်တိုက်မိခြင်းကြောင့် burr၊
2. ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပြည့်စုံခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ အပြင်ထွက်ထုပ်ပိုးအရည်အသွေးသည်စစ်မှန်သောထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးဖြစ်သည်။ ထုပ်ပိုးခြင်းသေတ္တာပေါ်ရှိလက်ရေးစာသည်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိပြီး၊ ထုပ်ပိုးသေတ္တာနှင့်အိတ်အားကုန်ပစ္စည်းအမည်၊ သတ်မှတ်ချက်နှင့်ပုံစံ၊ အရေအတွက်၊ မှတ်ပုံတင်ထားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်၊ စက်ရုံအမည်၊ လိပ်စာနှင့်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်စသည်တို့ဖြင့်မှတ်သားသင့်သည်။ အချို့ထုတ်လုပ်သူများကဆက်စပ်ပစ္စည်းများပေါ်တွင်သူတို့၏အမှတ်အသားပြုလုပ်ကြသည်။ ဖြန့်ဖြူးသူ၊ လောင်စာဆီစုပ်စက်စသည့်အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းများတွင်အသုံးပြုသူများကိုမှန်ကန်စွာအသုံးပြုရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်လမ်းညွှန်ချက်၊ လက်မှတ်နှင့်စစ်ဆေးရေးမှူးတံဆိပ်တို့တပ်ဆင်ထားသည်။ ၀ ယ်သည့်အခါပစ္စည်းအတုနှင့်ယုတ်ညံ့သည့်ထုတ်ကုန်များ ၀ ယ်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်သင်သတိပြုသင့်သည်။
3. အလှည့်အစိတ်အပိုင်းများပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ ရေနံစုပ်စက်နှင့်အခြားအလှည့်အပိုင်းများတပ်ဆင်ခြင်းကို ၀ ယ်သောအခါပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ရှိ၍ မရပ်တန့်သင့်သောလက်ဖြင့် pump pump ကိုလက်ဖြင့်လှည့်ပါ။ လှိမ့်သောဝက်ဝံများကို ၀ ယ်ယူသောအခါအတွင်းအ ၀ န်းလက်စွပ်ကိုလက်တစ်ဖက်ဖြင့်ထောက်ကာအပြင်ဘက်လက်စွပ်ကိုအခြားတစ်ဖက်ဖြင့်လှည့်ပါ။ ပြင်ပလက်စွပ်သည်လျင်မြန်စွာနှင့်လွတ်လပ်စွာလည်ပတ်နိုင်ပြီးတဖြည်းဖြည်းလှည့်ခြင်းကိုရပ်တန့်သင့်သည်။ အကယ်၍ လှည့်သောအစိတ်အပိုင်းများသည်ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ပါက၊ ၎င်းသည်ယိုယွင်းခြင်းသို့မဟုတ်ပုံပျက်ခြင်းကိုမဝယ်ပါ။
၄။ အကာအကွယ်ပေးသည့်မျက်နှာပြင်မှာကောင်းမွန်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ အစိတ်အပိုင်းအများစုကိုစက်ရုံတွင်အကာအကွယ်ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့် piston pin နှင့် bearing bush ကို paraffin wax ဖြင့်ကာကွယ်သည်။ piston ring နှင့် cylinder liner မျက်နှာပြင်အား antirust oil ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားပြီးအဆို့ရှင်နှင့် piston တို့သည်စက္ကူထုပ်ပိုးပြီးစုပ်ယူပြီးပလတ်စတစ်အိတ်များဖြင့် antirust oil ထဲသို့ ၀ င်သည်။ တံဆိပ်ခတ်လက်ပျက်စီးခြင်း၊ ထုပ်ပိုးခြင်းစက္ကူပျောက်ဆုံးခြင်း၊ ဆေးဝါးနှံ့ဖျားခြင်း၊
ပုံပျက်သောဂျီ ometric မေတြီအတိုင်းအတာကိုစစ်ဆေးပါ။ အချို့သောအစိတ်အပိုင်းများသည်မလျော်ကန်သောထုတ်လုပ်မှု၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်သိုလှောင်မှုကြောင့်ပျက်စီးလွယ်သည်။ စစ်ဆေးနေစဉ်ကအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ဖန်ပြားအကြားရှိအဆစ်များတွင်အလင်းယိုစိမ့်မှုရှိမရှိသိရန်ဖန်တုံးပတ်လည်၌ရိုးတံကိုလှိမ့်နိုင်သည်။ သံမဏိပြားများသို့မဟုတ်ပွတ်တိုက်ပြားကို clutch မောင်းနှင်သောပန်းကန်များဝယ်ယူသောအခါ၎င်းသည်ပျက်ယွင်းနေခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးရန်သင့်မျက်လုံးရှေ့ရှိသံမဏိပြားများနှင့်ပွတ်တိုက်ပြားကိုသင်ကိုင်နိုင်သည်။ ရေနံတံဆိပ်ကို ၀ ယ်သည့်အခါမူဘောင်ပါသောတံဆိပ်ခတ်ထားသောအဆုံးမျက်နှာသည်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိသင့်သည်။ frameless ရေနံတံဆိပျ၏အပြင်ဘက်အစွန်းကိုဖြောင့်ခြင်းနှင့်လက်ဖြင့်ပုံပျက်ဖြစ်သင့်သည်။ ၎င်းကိုလွှတ်ပြီးနောက်၎င်းသည်မူလအခြေအနေသို့ပြန်သွားနိုင်သင့်သည်။ pads အမျိုးမျိုးကို ၀ ယ်ယူရာတွင်ဂျီ ometric မေတြီအရွယ်နှင့်ပုံသဏ္checkာန်ကိုလည်းစစ်ဆေးသင့်သည်
6. ပရိသတျအပိုငျးမြားပျောက်ဆုံးနေခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ ပုံမှန်တပ်ဆင်ခြင်းအစိတ်အပိုင်းများသည်ချောမွေ့စွာတပ်ဆင်ရန်နှင့်ပုံမှန်လည်ပတ်မှုသေချာစေရန်ပြီးပြည့်စုံသောနဂိုအတိုင်းဖြစ်ရမည်။ အချို့သောအပိုပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများမှသေးငယ်သောအစိတ်အပိုင်းများပျောက်ဆုံးနေပါကတပ်ဆင်ထားသောအစိတ်အပိုင်းများသည်အလုပ်မလုပ်ပါသို့မဟုတ်ဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။
7. အစိတ်အပိုင်းများ၏မျက်နှာပြင်သံချေးခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ အရည်အချင်းပြည့်မီသောအပိုပစ္စည်းများ၏မျက်နှာပြင်သည်တိကျမှုနှင့်ချောချောမွေ့မွေ့ပြီးမြောက်သည်။ အပိုပစ္စည်းများများပိုအရေးကြီးလေလေ၊ တိကျမှုမြင့်လေလေ၊ သံချေးတက်ခြင်းနှင့်အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးထုပ်ပိုးမှုများသည်တင်းကျပ်လေဖြစ်သည်။ ဝယ်ယူသောအခါစစ်ဆေးရန်အာရုံစိုက်ပါ။ အစိတ်အပိုင်းများတွင်သံချေးများ၊ အစက်အပြောက်များသို့မဟုတ်ရာဘာအစိတ်အပိုင်းများအက်ကွဲခြင်းနှင့် elasticity ဆုံးရှုံးခြင်းများရှိခဲ့ပါကသို့မဟုတ်ဂျာနယ်မျက်နှာပြင်တွင်သိသာသောလှည့်သည့်ကိရိယာလိုင်းများရှိပါက၎င်းတို့ကိုအစားထိုးသင့်သည်။
8. နှောင်ကြိုးအစိတ်အပိုင်းများချောင်ရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောအစိတ်အပိုင်းများပါ ၀ င်သောဆက်စပ်ပစ္စည်းများအတွက်အစိတ်အပိုင်းများကိုဖိခြင်း၊ လျှက်ထားခြင်း၊ ဥပမာအားဖြင့်ရေနံစုပ်စက်ပလောင်နှင့်ထိန်းညှိသောလက်မောင်းကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်စုစည်းသည်။ clutch မောင်းနှင်သောဘီးနှင့်သံမဏိပြားများကို riveted လုပ်သည်။ စက္ကူ filter ကိုဒြပ်စင်မူဘောင်ဟာ filter ကိုစက္ကူကပ်လျက်ရှိသည်; လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၏ဝါယာကြိုးကြီးစွန်းကိုဂဟေဆော်ထားသည်။ ၀ ယ်နေစဉ်အတွင်းမည်သည့်အချည်းနှီးသောအရာကိုတွေ့ပါက၊